(၁၉)နှစ်ကြာပေါင်းသင်းပြီးမှ ဇနီးဖြစ်တဲ့သူဟာ မိန်းမအစစ်မဟုတ်ကြောင်းအား သိခဲ့ရသူ – Maythadin
Janလို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ Monica ဆိုတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့(၁၉၉၃)ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီကြားထဲကရအောင်
လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦးအကြား ယုံကြည်မှုပြိုကွဲစေမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Jan လက်ထပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မိန်းမအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ (၁၉)နှစ်ကြာမှပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အမှန်တရားကြောင့်ပါ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကား
ကျူးလွန်ခံလိုက်ရသလို ခံစားရတယ်။ကျွန်တော့် သူ့ကိုဘယ်လ်ဂျီယံကို လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါ်လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးရဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမယ့်​နောက်ဆုံးတော့လက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတကယ့်စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်။
အလုံးစုံမိန်းမပဲ။ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုံစံလက္ခဏာမျိုး လုံးဝကိုမရှိခဲ့တဲ့သူပါ။ သူမကမိန်းမအစစ်မဟုတ် တဲ့အကြောင်းကို အိပ်ယာပေါ်မှာတောင်မှ ကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ Jan ကပြောပါတယ်။ Monica တစ်ယောက် အချိန်ပြည့်အလုပ်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့
လက်ထပ်ခြင်းဟာစပြီးပြိုကွဲလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ Jan ရဲ့ကလေးတွေအတွက် အစ်မကြီးတစ်ယောက်လို ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို သတိထားမိလောက်တဲ့အထိ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “Monica ကစပြီးပြောင်းလဲလာတယ်။ သားအကြီးကောင်က
သူ့ကို နိုက်ကလပ်မှာမကြာခဏတွေ့မိတယ်ပြောတယ်။ အမြင်ရိုင်းတဲ့အတိုအပြတ်တွေကို သူဝတ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ ဒီကိစ္စဘူးပေါ်သလိုပေါ်ခဲ့ရတာပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုလာပြောတယ် Monica ကလိင်ပြောင်းထားတဲ့သူတဲ့။ကျွန်တော်မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။
သားကလည်းဒီကောလဟလအကြောင်းကို ကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ်။ သူ့ကိုနံရံဆွဲကပ်လိုက်ပြီး မင်းကယောက်ျးမဟုတ်လား ငါအမှန်တရားကို သိတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ သူကသူဟာယောက်ျားအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊လိင်ပြောင်းခွဲစိတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊
အခုလက်ရှိမှာတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အတိတ်တွေကို ပြန်ပြောဖို့မလိုဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ ကျွန်တေ်ာ့ကမ္ဘာကြီး ပြိုပျက်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီနေ့က အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။ရဲတွေရောက်လာရတဲ့အထိပဲလို့ ”Jan က ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ Jan မှာ အရင်အိမ်ထောင်နဲ့
ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း အသက်(၆၄)နှစ်အရွယ် Jan နဲ့အသက်(၄၈)နှစ်အရွယ်ဇနီးဖြစ်သူ Monica တို့ဟာ ကလေးထပ်မယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Jan ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရပြီး၊လက်ထပ်ခဲ့တာကိုဘယ်လ်ဂျီယံတရားရုံးကနေပယ်ဖျက်ဖို့
ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကိစ္စကို တရားရုံးကငြင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ Monica ကိုသူမရဲ့ ဇာတိကိုပြန်ပို့မယ့် ကိစ္စကိုလည်း ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်
လို့ချေါတဲ့ ဘယျလျဂြီယံအမြိုးသားတဈဦးဟာ Monica ဆိုတဲ့အငျဒိုနီးရှားအမြိုးသမီးတဈဦးနဲ့(၁၉၉၃)ခုနှဈက လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ဘယျလျဂြီယံ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးအာဏာပိုငျတှကွေောငျ့ သူတို့နှဈဦးလကျထပျရေးမှာ အခကျအခဲတှရှေိခဲ့ပမေယျ့လညျး အဲ့ဒီကွားထဲကရအောငျ
လကျထပျခဲ့တာပါ။ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့နှဈဦးအကွား ယုံကွညျမှုပွိုကှဲစမေယျ့ ဖွဈရပျတဈခုပျေါပေါကျလာခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါကတော့ Jan လကျထပျထားတဲ့ အမြိုးသမီးဟာ မိနျးမအစဈမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ (၁၉)နှဈကွာမှပျေါပေါကျခဲ့တဲ့ အမှနျတရားကွောငျ့ပါ။ ကိုယျထိလကျရောကျစျောကား
ကြူးလှနျခံလိုကျရသလို ခံစားရတယျ။ကြှနျတေျာ့ သူ့ကိုဘယျလျဂြီယံကို လှယျလှယျကူကူ ချေါလာခဲ့ရတာမဟုတျဘူး။သူမနဲ့ပတျသကျပွီးတရားရုံးရဲ့နှိုကျနှိုကျခြှတျစဈဆေးမှုတှကေိုခံခဲ့ရတယျ။ဒါပမေယျ့နောကျဆုံးတော့လကျခံပေးခဲ့ပါတယျ။သူမဟာတကယျ့စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့မိနျးမတဈယောကျ။
အလုံးစုံမိနျးမပဲ။ယောကျြားဆိုတဲ့ပုံစံလက်ခဏာမြိုး လုံးဝကိုမရှိခဲ့တဲ့သူပါ။ သူမကမိနျးမအစဈမဟုတျ တဲ့အကွောငျးကို အိပျယာပျေါမှာတောငျမှ ကြှနျတျောသတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ Jan ကပွောပါတယျ။ Monica တဈယောကျ အခြိနျပွညျ့အလုပျရလာပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာပဲ သူတို့နှဈဦးရဲ့
လကျထပျခွငျးဟာစပွီးပွိုကှဲလာခဲ့ပါတယျ။သူမဟာ Jan ရဲ့ကလေးတှအေတှကျ အဈမကွီးတဈယောကျလို ဖွဈလာခဲ့ပွီး၊သူမနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားမှုတှကေို သတိထားမိလောကျတဲ့အထိ အရမျးရငျးနှီးတဲ့ဆကျဆံရေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ “Monica ကစပွီးပွောငျးလဲလာတယျ။ သားအကွီးကောငျက
သူ့ကို နိုကျကလပျမှာမကွာခဏတှမေိ့တယျပွောတယျ။ အမွငျရိုငျးတဲ့အတိုအပွတျတှကေို သူဝတျလာတယျ။ဒါကွောငျ့ပဲ ဒီကိစ်စဘူးပျေါသလိုပျေါခဲ့ရတာပါ။ သူငယျခငျြးတဈယောကျက ကြှနျတေျာ့ကိုလာပွောတယျ Monica ကလိငျပွောငျးထားတဲ့သူတဲ့။ကြှနျတျောမယုံနိုငျခဲ့ဘူး။
သားကလညျးဒီကောလဟလအကွောငျးကို ကြှနျတေျာ့ကိုပွောပွတယျ။ သူ့ကိုနံရံဆှဲကပျလိုကျပွီး မငျးကယောကျြးမဟုတျလား ငါအမှနျတရားကို သိတယျလို့ ပွောလိုကျတယျ။အဲ့ဒီမှာပဲ သူကသူဟာယောကျြားအဖွဈ မှေးဖှားခဲ့သူဖွဈပွီး၊လိငျပွောငျးခှဲစိတျထားတဲ့သူဖွဈတဲ့အကွောငျး၊
အခုလကျရှိမှာတော့ မိနျးမတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အတိတျတှကေို ပွနျပွောဖို့မလိုဘူးလို့ပွနျဖွခေဲ့တယျ။ ကြှနျတျော့ကမ်ဘာကွီး ပွိုပကျြသှားတာပဲ။အဲ့ဒီနကေ့ အကွီးအကယျြ ပေါကျကှဲခဲ့တယျ။ရဲတှရေောကျလာရတဲ့အထိပဲလို့ ”Jan က ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။ Jan မှာ အရငျအိမျထောငျနဲ့
ကလေးနှဈယောကျရှိပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး အသကျ(၆၄)နှဈအရှယျ Jan နဲ့အသကျ(၄၈)နှဈအရှယျဇနီးဖွဈသူ Monica တို့ဟာ ကလေးထပျမယူဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။အခုဆိုရငျတော့ Jan ဟာစိတျကနျြးမာရေးကုသမှုခံယူနရေပွီး၊လကျထပျခဲ့တာကိုဘယျလျဂြီယံတရားရုံးကနပေယျဖကျြဖို့
ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့လညျး ဒီကိစ်စကို တရားရုံးကငွငျးဆိုခဲ့ပွီး၊ Monica ကိုသူမရဲ့ ဇာတိကိုပွနျပို့မယျ့ ကိစ်စကိုလညျး ခှငျ့မပွုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ ကြေးဇူးလညျးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။ ခရကျဒဈ
ယ​နေ့မှာဖွင့်​လှစ်​ခဲ့​သော အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲရဲ့ သိန်းငါး​ထောင်​ဆုပိုင်ရှင် ထွက်​ပေါ်လာပါပြီ​နော်​
မြန်မာမှာရိုက်တဲ့ ?? ??????? ?? ??? က ပေါက်ဖော်တို့ နိုင်ငံမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်လာ